Usoro metuta nke dị mkpa | Martech Zone
Pardot tinyere nke a ahịa metrik ahịa aghụghọ nke a na-eme na gbaa.
Ahia nke taa nchịkọta dị ike. Ndị na-ere ahịa nwere ohere ịnweta ụdị metrik niile, site na echiche peeji na ọnụọgụ nke ndị na-agba akwụkwọ na ọnụọgụ ndị na-ekpughe karịa metụtara ndu na ahịa. Site na nghọta na-eto eto na data ịzụ ahịa, ọ dị mfe ịnwe data nke - ọtụtụ oge karịa - anaghị emetụta ego gị. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ilekwasị anya na metrics bụ akara ngosi dị mma nke ire ere na ọganiihu ahịa. site na Mgbaghara
Enwere m ụfọdụ nchegbu gbasara ụfọdụ metrik. Dịka ọmụmaatụ, ahụghị m mkparịta ụka nke uru maka ndị ahịa ma ọ bụ njide ndị ahịa. Ka anyị na-ele anya na-eto eto ahịa email anyị - dịka ọmụmaatụ - anyị kwesịrị ịghọta njedebe na njigide nke ndepụta ndị debanyere aha anyị. Anyị na-ahụ n'etiti 3% na 5% nke ndepụta anyị na-agbanwe kwa izu ọ bụla ka ndị mmadụ na-ahapụ ọrụ ma ọ bụ naanị gbanwee adreesị email. Nke ahụ pụtara na iji nọgide na-eto eto ndị debanyere aha anyị, anyị kwesịrị ịkwalite ma merie ụkọ ahụ. Anyị kwesịrị ilele mgbanwe ọ bụla dị egwu na ọnụego njigide… ọ bụrụ na ndị debanyere aha ole na ole pụọ, anyị nwere ike ịchegharị atụmatụ atụmatụ email anyị.
Enweghi usoro nke asọmpi na-atụ egwu. Anyị na-ahụkarị ndị ahịa na-agbagha mgbe stats ha dara - mana oge ụfọdụ oge na-emetụta onye ọ bụla na ndị ahịa anyị ka na-abawanye ahịa ha. Enwere ọnụọgụ ole na ole ndị ọzọ dị mkpa (yana ọwa ahịa dị mkpa)… mana echere m na nke a bụ mmalite dị mma.
Tags: ọnọdụ adụba ọnụegopịa idugapịa-site ọnụegoemechi emechina-eri kwa nnwetaụgwọ kwa Pịaụgwọ kwa nductrọnụego mgbapụta-eso ụzọenyiMmetụtaedu edueduna-edugaahịa metricsemeghe ọnụegomgbagharapostsịzụta omumereferralsezipụmbakịkekọrịta stats